Chitendero cheAfrica - Mbog Bassong (Bhuku) - AFRIKHEPRI
MOSQUIRIX, ANONYANYA KUTI VACCINE ANOKUDZIDZISA KUNA MALARIA (MALARIA)
kugashira BHUKU ROKOTENGA
Isu takangotarisa mumhedziso yechitsauko 3 kuti chiKristu chinobva pamanzwiro emamiti yeParaosi nguva yezvakanaka zvekunaka kwayo. Pfungwa wokuberekwa ne "Mutsvene", ne "utatu" kuti "muponesi" nyika, "Kumuka", kunyange vamwe zviratidzo, kufanana gwenya Corona pamusoro kwaKristu musoro kuwa pasi Kunamata kwezuva uye kuwanda kwefizikiki (chidimbu) chinoitwa neKamit nyanzvi dzenyeredzi. Kubvira ikozvino, tinofanira kufunga kuti nzvimbo tsvene "vanamwari" vanotakura chisimbiso chezvivako zvitsvene zvakatsaurirwa kune chimiro chefizikiki chine ruzivo rwakasimbiswa.
Zvinogona kuonekwa kuti kereke yeRoma yakangowanazve mamwe magwaro eKamit akakura kuburikidza nekuzvipa ivo kuna Jesu Kristu mushure mokunge vanyatsodzigura. Akange asina nguva uye kushivirira kuti adzidze uye anzwisise kukosha kwekufananidzira maererano nesayenzi yeChina. Asi nokuti ndizvo zvazviri, tinogona kukanganwira.
Tinofanira kukanganwira nokuti ndiyo mutemo. Zvechokwadi, pamwero wevanhu vemitambo, tinoita basa reOsiris (kutanga), ipapo iyo yemwanakomana wake Horus (kuenderera mberi kwekuwedzera kwehupenyu hunorayirwa neAfrica myths nemitambo). Kubva maonero aya, nyika yeNordic (Western neArabhu) inoita basa Seth mahombekombe. Nokuisa Africa muuranda uye pasi pejoko rekoloni, nyika ino yekuchamhembe yakangobatsira kuvenga Osirian Seth mune kukunda kwesimba. Ichokwadi, chimiro chake chekushandura uye chekugadzirira chakanga chakatemerwa nechisikigo, asi icho cheAsia, the yin bv Le yang, inowedzera zvimwe kubva kune imwe yenyika yekamit uye nyika yeNordic.
Le yin bv Le yang kuumba, saka kutaura, kukosha kunokosha maâtiste pakati pekutanga nyika mbiri; saka akafanirwa kuzivisa zvekutanga, kwete chisimba kana rugare. Mukumhanya kwaro kune simba, ichashatisa West yekukunda nekugadzirira, pasina mubvunzo, kuuya kwepasi rose iro richadzokorora zvakare Kamit universe neAfrica kusvika mberi kwenyika yose. Ngatitore mazwi e Bhuku Rokupinda paChiedza cheZuva panguva Farawo, asingazivikanwi akadanwa Bhuku revakafa ; mashoko akabudiswa naJesu Kristu:
"Unogona kuenda! Tinokuregererai zvivi zvenyu zvose, uye tinodzima zvivi zvenyu. "
Ndizvo zvatinotaura. Tinofanira kunzwisisana: kana chiKristu chichiri chirevo chechokwadi cheWestern inokunda, inowana chikamu chikuru kubva kuCartesian "dzidziso" ye disjunction uye kusabviswa kubva kune zivo. Icho chirevo chemuchina webhinari: "Ndicho kana kuti kwete icho". Isu tinogona kutendeka kana kusavimbika. Anoumba nyika inofadza, yakaparadzana nokusingaperi uye isina tariro "inogona kuva ichi kana icho, kana kunyange zvose panguva imwe chete," kugamuchirwa kwemamwe maonero zvinoenderana nemafungiro edzimhosva eKamit. Kusingaperi uye kutangwa tsika zvakashandiswa kushandura hutungamiri hwevanhu uye kunyange kutarisira kuratidzwa kwechirwere.
Kusiyana mutemo wehupenyu. Mhando dzakasiyana-siyana, yemiti yemhuka uye yemhuka zvinobatana mukubatana kukuru kwepasi rose, rimwe nerimwe rinoronga nekuzvidzivirira uye rinowirirana kuitira kuti rienzanise rose. Hapana vanhu vanogona, naizvozvo, kuisa nzira yavo yekuve pane imwe. Vanhu veNordic vakave varanda varanda veKamit uye vakavatora. Kunyanya: vanoenderera mberi vachifunga nezvepasi mujeri rechitendero chavo chete, pfungwa yavo chete, inongova ivo chete, maitiro avo chete.
Kana Afrika yakagamuchira zvose zvechitendero chekunze kunze kwekuvadzora, ndeyekuda kwechimiro chemazuva ano chakazarurirwa kunyika. Asi Africa haina kutora zvinonzi "zvitsvene" mabhuku nemitemo. Zvikonzero zviri nyore: nzira yaro yehupenyu uye kugoverana, yakabatanidzwa pane hutungamiri hunoendeswa nesangano reShoko neChokwadi, yakawana kuti varume vave nerufaro naMwari uye kubudirira. Masangano aya akaramba achienzanisa nechokwadi ichi chaMwari uye kuna Mwari; chokwadi, vanhu veAfrica vave vakangwarira nezve "zvakanyorwa" magwaro uye vakachinjwa kuva "chokwadi" panguva. Chimiro chakaramba chichishanda uye kunyora zvachose chakanyanyogadzirirwa mumaoko ezvokutanga zvakare kuzadzisa basa revanyori.
Nhasi tinokwanisa kuyera kuyerwa kwe "dzidziso" dzekutenda musangano rezvemagodhi rakanyorwa munhoroondo yevanhu.
Mesiasi uye vaporofita vakanga vasingagoni kuberekerwa muAfrica, varege kutaurira "zvakanaka" zvavo zvakanaka. Aya "nhume" dzaMwari dzakatanga kuva nechimwe chekutaura zuva iro vanopikisa vaitaura nezvekushungurudzwa kwevanhu, hutapwa, hutongi, hurombo, kusaruramisira uye kusaenzana semikana yekuve. Mukuita kudaro, vakaparadza tsika dzetsika kuburikidza nekubatanidza chiKristu chisina kusiri neIslam, asiwo mazita avo muzita rezvinzi zvinonzi pasi rose. Kana tichibvumirana kuti tinofanira kuchengetedza nyika kubva kuvanhu, tinofanira kudzokera kune dzimwe dzimba dzeAfrica netsika dzavo. Vaya vanoverenga zvitsauko zvokutanga vachagovera chirevo ichi naJean Ziegler:
"IAfrica cosmogony inoti hapana inorova kuchengetedza, kusingaperi, kuwedzera kwehupenyu."
Mune milieus yemaitiro ehupenyu muAfrica, rudo rwemuvakidzani haruna kuparidzirwa, asi rwakararama zuva rimwe nerimwe nehurongwa hwehurongwa huri neropafadzo uye neropafadzo, nanhasi, kutungamirirwa kwekugovana uye kubatana uye kunyanya , kusanganiswa kwekuedza kwekuita kwebasa rakafanana rinobva kuna Mwari, kureva kurongeka kweNyika yose inofungidzirwa se valeur mumaziso evose. Mune mamiriro ezvinhu emufaro, yaive yakakurumidza kukanganwa Mwari. Kudzokera kunzvimbo huru yezvinyorwa zvine sulphur yekunamatwa kwake kune chimwe chinhu chine chokuita nenhamo dzakawanda dzinoitwa nedzimwe nyika dzechitendero uye dzevanhu.
Zvechokwadi, basa remumunda, kushamba, hove, kuvaka dzimba, kuroorana, kutangira kumapoka emakore, dzidzo, zvose zvinobvumirwa kuratidza kudiwa kwekuraira, mutual help uye pacification wekuvapo. Pane rudo rwemuvakidzani runopfuura izvozvi here? Hapana vamwe vanhu panyika ino yevanhu vakagadzira ukama hwakadaro, zvekuti rudo nerudo, sekutaura kwechitendero zvekugoverana, zvakaonekwa, nenzira dzakawanda, zvikuru kuziva.
Mune mweya wevakachenjera uye wakatangwa, munhu wese munhu wose uye munhu wose. Izvi zvakabvumira kukwirira kwemafungiro uye zvichienderana nekuponeswa pamwe chete: hakuna existential angst, hapana chivi chepakutanga, pasina mhosva, hapana ruvengo, kwete kushungurudzika, kusatarisira kwemuprofita anofungidzira kana mesiya anotaura kuti akagamuchira kubva kuna Mwari "mutemo waMwari". Vaporofita venhoroondo, Mosesi, Jesu, Mohammed, Buddha, vose veNigro-Afrika kana veNigro-Africa vanoona shoko ravo rerudo richibudirira kune imwe nzvimbo kunze kweAfrica.
Izvozvi zviri mukati mevanhu vasina hanya, vanosimudza uye vane chisimba kuti shoko ravo rerudo, rakashamisika kubvira pakutanga, rakanzwika nevanotenda vavo uye vadikanwa, vasati vabudirira kuburikidza nekutendeukira pasi pasi pechisimba chemunondo uye annuities to be raked "Kutenda" kune maziso emakaro, ropafadzo, kupandukira, kubatsirwa, varanda, ropa revanhu.
Minyengetero yose haisi chinhu kunze kwekugara kwevanhu uye zvematongerwe enyika zvekugoverana nekuenzanisa. Mune izvi, Africa inoratidza chidimbu chekukwanisa kwezvikwata zvayo zvisingaenzaniswi nedzimwe vanhu. Hapana chinogona uye hachikwanisi kuchinja mitambo yemitambo uye vaprista vanotanga vanovadzivirira. Zvakakosha kudzokera kwairi nekudzokorora mukurumbira wavo nenzvimbo dzinotorwa nechechi uye, mukuita kudaro, kuvandudza mararamiro avo ehupenyu. Iyi ndiyo chete inogona kugadzirisa kurwisana nekuwedzera uye hondo dzezvitendero zvekutenda. Kubva pakuona kwemaonero aya, jaya rinofanira kusvika pedyo nevakachenjera uye rakatangwa.
Mukusangana kweizvi zvose, ngatiregei kufunga kuti zvinhu zvose zvakarasika. Mutauro weAfrica hauna kutaura izwi rekupedzisira. Chitendero chake chichadzokidzwazve mumadota eMabhuku e "kutenda" uyezve achajekesa vagari venyika yehupenyu hwake hwevanhu uye zvisingaenzanisiki zvevanhu, zvematongerwo enyika uye zvezvematongerwe enyika.
Kubva mubhuku rinonzi LA RELIGION AFRICAINE -Kiyikaat Editions
Gluten: Mazuva ano gorosi rinotitambudza sei - Julien Venesson
Kunamata kweMasaasai: mazwi naKenny Matampash Ole Meritei